၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (3 of 10) – Dhamma Training Center
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (3 of 10)
(က-၁) အာ = အထပ်ထပ်အခါခါ သေ၀န= ထုံမွမ်းသည်၊ ပွားများသည်။ ဇောတစ်ခုက ထိုဇောမျိုး ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်စေသည်။ ပမာအားဖြင့် ရှေ့ကုသိုလ်ဇောက နောက်နောက် ဇောကို ကုသိုလ်ဖြင့် အထပ်ထပ် ထုံမွမ်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(က-၂) Repetitive condition = အာသေ၀နပစ္စည်း။ ‘အာသေ၀န စ ဗာလာနံ’၌ အာသေ၀န အဓိပ္ပါယ်မှာ မပေါင်းသင်းရဟု ဆိုလိုပါသည်။ ပဋ္ဌာန်းတရားတွင်မူ အာသေ၀နဟူသည် အထပ်ထပ် ထုံမွှမ်းခြင်း Repetation. Doing something again and again. ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
(က-၃) ပမာပြရသော် နွေအခါပူပူကြီး၌ ရေချိုးရာ တစ်ဖလားလောင်းသော် မအေးသေးပါ။ နှစ်ဖလား လောင်းမအေးသေးပါ။ သုံးဖလား၊လေးဖလား ငါဖလားဆက်ကာ ဆက်ကာ လောင်းပေးသော်အခါ ခန္ဓာကိုယ် ကြီး တဖြေးဖြေး အေးလာသည့်ပမာတည်း။ ရှေ့ရေဖလားများ ကခန္ဓာကိုယ်အေး လာစေရန် နောက်နောက် ရေဖလားများကို ကျေးဇူးပြုပါသည်။ အာသေ၀နပစ္စည်းကို ဤဥပမာတို့ဖြင့်လည်း နားလည်နိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်။
(က-၄) အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် ထုံမွမ်းခြင်းကို တစ်နည်းဥပမာ ထပ်ပေးရသော် နံ့သာကြုတ်ထဲ အ၀တ်အစား ထည့်ထားပါက ကာလကြာလေ ပို၍ပို၍ မွေးကြိုင်လာလေ၊ ကာလကြာလေ ပို၍ပို၍ မွေးကြိုင်လာလေ ဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် ရှေးရှေး အမွေးအကြိုင်ထုံမွမ်းမှုက နောက်နောက်အမွေးအကြိုင် ထုံမွမ်းမှုကို အားရှိ စေပါသည်။
(က-၅) အာသေ၀နပစ္စည်းကို လောကအမြင်ဖြင့် လေ့လာလျှင်လည်း နားလည်လွယ်ပါသည်။ ကာလရှည်ကြာ အဖန်ဖန် အထပ်ထပ်လုပ်နေပါက အားကောင်းလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
(က-၆) Musical instrument တခုခုတီးခတ်သည်နှင့် ပမာပြုနိုင်ပါသည်။ အစ၌အတီး အမှုတ်ကို လေ့ကျင့် နေရပြီး နောက်ပိုင်းကာလတွင် တီးမှုတ်နေခြင်းကပင် လေ့ကျင့်နေခြင်း ဖြစ်ပေတော့သည်။ အကြိမ်များများ တီးမှုတ်လေ ကျွမ်းကျင်လာလေပေတည်း။ ဤသည်ကို အာသေ၀နနှင့် ပမာပြုကာ လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(က-၇) ကုသိုလ်ဇောသည် ကုသိုလ်ဇောကိုလည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်ဇောသည် အကုသိုလ်ဇောကိုလည်း ကောင်း အားကောင်းသည်ထက် အားကောင်းအောင် အာသေ၀နသတ္တိဖြင့် အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် ထုံမွှမ်းကာ အားဖြည့်ပေးပါသည်။ ဥပမာ-ရှေးရှေးသင်ကြားမှုသည် နောက်နောက် သင်ကြားမှုကို လွယ်ကူလာစေရန် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။
(က-၈) It is compared to previous learning. You learn something now and then later some other thing. The first learning reinforces your second learning. The second learning reinforces the third learning and so on.
(က-၉) လောကီ ဈာန် တန်ခိုး အဘိညာဉ် မဂ် ဖိုလ်ရမှု ပါရမီပြည့်မှုတို့ဟူသည် အာသေ၀န ပစ္စည်းပင်တည်း။
(က-၁၀) ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တို့ အကြောင်းအထောက်အပံ့ကြီးစွာရပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမှုသည် ပကတူပနိဿယ၏ သတ္တိဖြစ်ပြီး။
(က-၁၁) အာသေ၀နသတ္တိဖြင့် အကြိမ်ကြိ်မ်ထုံမွမ်းပြီး ကျေးဇူးပြုခံရသည့် ပရမတ္ထ နာမ်တရားက အားကောင်း လာပါသည်။
(က-၁၂) ဘုရားအလောင်းတော်နှင့် အလောင်းအလျာများ ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့သည့်ကာလ ရှည်ကြာပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၉၁-ကမ္ဘာအထက် ကာလက ပြုခဲ့သည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့က ဘုရားဖြစ်တော်မူသည့် ဘ၀တွင် ဘ၀တွင် လာပြီး ကျေးဇူးပြုပါသည်။
၁၂- အာသဝေနပစ်စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (3 of 10)
(က-၁) အာ = အထပျထပျအခါခါ သဝေန= ထုံမှမျးသညျ၊ ပှားမြားသညျ။ ဇောတဈခုက ထိုဇောမြိုး ထပျခါထပျခါ ဖွဈစသေညျ။ ပမာအားဖွငျ့ ရှကေု့သိုလျဇောက နောကျနောကျ ဇောကို ကုသိုလျဖွငျ့ အထပျထပျ ထုံမှမျးခွငျးကို ဆိုလိုသညျ။
(က-၂) Repetitive condition = အာသဝေနပစ်စညျး။ ‘အာသဝေန စ ဗာလာနံ’၌ အာသဝေန အဓိပ်ပါယျမှာ မပေါငျးသငျးရဟု ဆိုလိုပါသညျ။ ပဋ်ဌာနျးတရားတှငျမူ အာသဝေနဟူသညျ အထပျထပျ ထုံမှမျးခွငျး Repetation. Doing something again and again. ဟု အဓိပ်ပါယျရပါသညျ။
(က-၃) ပမာပွရသျော နှအေခါပူပူကွီး၌ ရခြေိုးရာ တဈဖလားလောငျးသျော မအေးသေးပါ။ နှဈဖလား လောငျးမအေးသေးပါ။ သုံးဖလား၊လေးဖလား ငါဖလားဆကျကာ ဆကျကာ လောငျးပေးသျောအခါ ခန်ဓာကိုယျ ကွီး တဖွေးဖွေး အေးလာသညျ့ပမာတညျး။ ရှရေ့ဖေလားမြား ကခန်ဓာကိုယျအေး လာစရေနျ နောကျနောကျ ရဖေလားမြားကို ကြေးဇူးပွုပါသညျ။ အာသဝေနပစ်စညျးကို ဤဥပမာတို့ဖွငျ့လညျး နားလညျနိုငျမညျ ဖွဈပါ သညျ။
(က-၄) အဖနျဖနျ အထပျထပျ ထုံမှမျးခွငျးကို တဈနညျးဥပမာ ထပျပေးရသျော နံ့သာကွုတျထဲ အဝတျအစား ထညျ့ထားပါက ကာလကွာလေ ပို၍ပို၍ မှေးကွိုငျလာလေ၊ ကာလကွာလေ ပို၍ပို၍ မှေးကွိုငျလာလေ ဖွဈပါသညျ။ ဤတှငျ ရှေးရှေး အမှေးအကွိုငျထုံမှမျးမှုက နောကျနောကျအမှေးအကွိုငျ ထုံမှမျးမှုကို အားရှိ စပေါသညျ။
(က-၅) အာသဝေနပစ်စညျးကို လောကအမွငျဖွငျ့ လလေ့ာလြှငျလညျး နားလညျလှယျပါသညျ။ ကာလရှညျကွာ အဖနျဖနျ အထပျထပျလုပျနပေါက အားကောငျးလာမညျ ဖွဈပါသညျ။
(က-၆) Musical instrument တခုခုတီးခတျသညျနှငျ့ ပမာပွုနိုငျပါသညျ။ အစ၌အတီး အမှုတျကို လကေ့ငျြ့ နရေပွီး နောကျပိုငျးကာလတှငျ တီးမှုတျနခွေငျးကပငျ လကေ့ငျြ့နခွေငျး ဖွဈပတေော့သညျ။ အကွိမျမြားမြား တီးမှုတျလေ ကြှမျးကငျြလာလပေတေညျး။ ဤသညျကို အာသဝေနနှငျ့ ပမာပွုကာ လလေ့ာနိုငျမညျ ဖွဈပါ သညျ။
(က-၇) ကုသိုလျဇောသညျ ကုသိုလျဇောကိုလညျးကောငျး၊ အကုသိုလျဇောသညျ အကုသိုလျဇောကိုလညျး ကောငျး အားကောငျးသညျထကျ အားကောငျးအောငျ အာသဝေနသတ်တိဖွငျ့ အဖနျဖနျ အထပျထပျ ထုံမှမျးကာ အားဖွညျ့ပေးပါသညျ။ ဥပမာ-ရှေးရှေးသငျကွားမှုသညျ နောကျနောကျ သငျကွားမှုကို လှယျကူလာစရေနျ ကြေးဇူးပွုသကဲ့သို့ ဖွဈပါသညျ။
(က-၉) လောကီ ဈာနျ တနျခိုး အဘိညာဉျ မဂျ ဖိုလျရမှု ပါရမီပွညျ့မှုတို့ဟူသညျ အာသဝေန ပစ်စညျးပငျတညျး။
(က-၁၀) ကုသိုလျ၊ အကုသိုလျတို့ အကွောငျးအထောကျအပံ့ကွီးစှာရပွီး အကြိုးဖွဈထှနျးလာမှုသညျ ပကတူပနိဿယ၏ သတ်တိဖွဈပွီး။
(က-၁၁) အာသဝေနသတ်တိဖွငျ့ အကွိမျကွိမျထုံမှမျးပွီး ကြေးဇူးပွုခံရသညျ့ ပရမတ်ထ နာမျတရားက အားကောငျး လာပါသညျ။
(က-၁၂) ဘုရားအလောငျးတျောနှငျ့ အလောငျးအလြာမြား ပါရမီဖွညျ့ကငျြ့ခဲ့သညျ့ကာလ ရှညျကွာပါသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ ၉၁-ကမ်ဘာအထကျ ကာလက ပွုခဲ့သညျ့ ကုသိုလျကောငျးမှုတို့က ဘုရားဖွဈတျောမူသညျ့ ဘဝတှငျ ဘဝတှငျ လာပွီး ကြေးဇူးပွုပါသညျ။